Posted Oct 4, 2012, 4:01 PM by lin ker
Posted Sep 20, 2012, 9:05 PM by lin ker
ပြဿနာရဲ့ကျောရိုးက လူသတ်မှု murder crime ဖြစ်တယ်၊ ကျောင်းသား
တပ်မတော်ရဲ့မူဝါဒ policy ကြောင့်ဖြစ်လာရတာမဟုတ်ဘူး၊ ကျောင်းသား
Rules and regulation တွေအတိအကျရှိတယ်၊
ဥပဒေနဲ့အညီဖြစ်ခဲ့သလား၊ တရားမျှတမှုရှိခဲ့သလားမရှိခဲ့ဘူးလား စသည်တို့ကို
ဘ၀နဲ့ရင်းပြီးနစ်နာခဲ့ကြရတယ်၊ ဒါကိုစာနာ နားလည်ပေးရမယ်၊
ဒါဟာကျနော်လိုချင်တဲ့ ကျနော်တို့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ လူအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်၊
ကျနော်လိုချင်တဲ့ တရားမျှတမှုဖြစ်တယ်၊ ဘက်မလိုက်မှုဖြစ်တယ်၊
ဒါတွေကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီး မကဒတကိုကျနော်တို့ချစ်ပါတယ်၊ လူ့အခွင့်အရေးကို
ကျနော်မြတ်နိူးပါတယ်လို့ လူထုကိုချပြလို့မရပါ၊ အမှန်တရားကို လက်ဆုတ်ကိုင်
နိုင်ဖို့ ကျနော်တို့လက်တွေအားလုံး မူဝါဒမြဲအောင်ဆုတ်ကိုင်ထားဖို့လိုပါတယ်၊
အခြားတစ်ဖက်မှာလည်း ကျောင်းသားတပ်မတော်ဟာ ဒါးစားခံဖြစ်ခဲ့ရပြန်တယ်၊
ဒါးစားခံဖြစ်ခဲ့ရတယ်၊ ဒီနေ့နာမယ်ပျက်ခဲ့ရတယ်၊ အဓိကတာဝန်ရှိသူတွေပါခဲ့တယ်၊
မိတ်ဖက်ကင်းကင်း ရှင်းရှင်းမြင်ဖို့လိုတယ်၊ ယုတ်အဆွဆုံးအိမ်သူသက်ထားပါ
နေခဲ့ရင်တောင် ညှာတာပေးလို့မရတာ တရားမျှတမှုပါ၊ ခင်ဗျားတို့ကျနော်တို့အားလုံး
ဒီတော့ ဒီလိုဘ၀နဲ့ရင်းပြီးနစ်နာခဲ့ကြသူတွေအတွက် ဘာတွေလုပ်သင့်သလည်း၊
ပြီးတော့ ဒါးစားခံဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ကျောင်းသားတပ်မတော်ကို ဘယ်လိုလုပ်ပြီး
ထမ်းဆောင်ရင်း အသက်ပေးသွားသူတွေကျိုးကန်းသွားသူတွေ အကောင်းပကတိ
ဘ၀တစိတ်တပိုင်းကိုတော်လှန်ရေးမှာ မြှုပ်နှံခဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို
ကျနော်မြင်တာကတော့ ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာ စိုးရိမ်ကြပူပန်ကြသူတွေအား
လုံးဟာ လက်ရှိကျောင်းသားတပ်မတော်တစ်ခုနဲ့သာ သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပဲ
လူ့အခွင့်အရေးအပေါ်၊ တရားမျှတမှုအပေါ် စံထားပြီးဖြေရှင်းနိုင်သူတွေ
ကျနော်တို့တော်တော်များများဟာ ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခင်ပြီး တရားမင်တတ်သူတွေအများကြီး
အမှန်တကယ်မူဝါဒမျက်လုံးနဲ့ ကြည်ကြစတမ်းဆိုလျှင် အသတ်ခံခဲ့ရသူတွေဟာ
ကျနော်တို့တော်လှန်ရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် ညီအစ်ကိုတွေပါ၊ ကျနော်တို့
မကဒတ အဖွဲ့ဝင်တွေပါ၊ သူတို့ခံစားမှုကိုတကယ်နားလည်ရင်
ဖြစ်သလို သူတို့ကိုလည်းကျနော်တို့ချစ်ကြတဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲ့
ဂုဏ်သိက္ခာ အမှန်ပြန်လည်ရရှိရေးမှာ တတပ်တအားပါဝင်ပေးကြဖို့ကိုလည်း
လက်ရှိအနေအထားမှာ ထောက်လှမ်းရေးဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းကို အကြောင်းပြပြီး
နေတယ်၊ ထောက်လှမ်းရေးဆိုတာ မင်းလည်းဖြစ်နိုင်ငါလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့တောတွင်း
ဥပဒေရဲ့အားနည်းချက်ဖြစ်လို့ အာဏာလက်ရှိ ရှိနေသူကအသာစီးရတတ်တဲ့
ဒါဆိုရင်တော့ ထောက်လှမ်းရေးဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်း အဓိကအကြောင်းမဟုတ်
အခုကြည့်ကြပါ၊ ခံရသူအချင်းချင်းကဆန့်ကျင်ဘက်တွေဖြစ်ပြီး အချင်းချင်းပြန်ချနေ
ရသလိုဖြစ်နေတယ်၊ ဒါးစာခံဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော်ရယ် အသတ်ခံခဲ့ရ
ထိပ်တိုက်တွေ့နေကြတယ်၊ အမှန်တကယ်ဆိုရင် ပုခုန်းဖက်ပြီးဖြေရှင်းရမဲ့ကိစ္စတွေပါ၊
မင်းလဲခံခဲ့ရတယ်၊ ငါတို့လည်းခံခဲ့ရတယ်ဆိုပြီး ညီရင်းအစ်ကိုစိတ်ဓါတ်နဲ့ဖြေရှင်းကြရမှာပါ၊
မရနိုင်မှန်း ခန့်မှန်းမိပါတယ်၊ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ မကဒတအနေနဲ့
အရေးပေါ်ညီလာခံမျိုး(သို့) အထူးစီမီနာလိုတစ်ခုကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ခေါ်ယူပြီး
Posted Jan 6, 2013, 6:56 PM by lin ker
Posted Sep 16, 2012, 2:07 PM by lin ker
"မပြောင်းလဲသေးတဲ့ ပြောင်းလဲချင်သူများ" ( ရေးသူ -ဆမားညီညီ) Baydar Lam ‎ ရေးသူ -ဆမားညီညီ ABSDF မြောက်ပိုင်း၇ဲဘော်ဟောင်း ၁၉၈၈ ဒီမိုကရေစီရေး အုံကြွမှုတွေအပြီးမှာ ကျောင ...
Posted Jan 5, 2013, 3:41 PM by lin ker
၀ံပုလွေများထံမှလွတ်မြောက်ခြင်း မြောက်ပိုင်းအဖြစ်အပျက်များရဲ့ အတွင်းဖက်အကျဆုံး အကြောင်းအရာတွေကို ၀ံပုလွေများထံမှလွတ်မြေ ...
Posted Sep 9, 2012, 5:56 AM by lin ker
မြောက်ပိုင်းလူသတ်မှု ထောက်လှမ်းရေးပါ အစစ်ခံဖို့လိုဟု ဒေါက်တာနိုင်အောင်ပြော မြတ်ကျော်သူ | အင်္ဂါနေ့၊ စက်တင်ဘာလ ၀၄ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၇ နာရီ ၁၈ မိနစ်	ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ယခင်စစ်အစိုးရအဆက်ဆက် ချမှတ်ထားသော ပြည်ဝင်ခွင့် ပိတ်ပင်ထားသူများစာရင်း Black List မှ ပယ်ဖျက်မှုအပြီး ပြည်ပရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားသူတဦးဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစု၏ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာနိုင်အောင်လည်း ပြန်ရောက်လာခဲ့သည်။အိမ်ပြန်ခရီးစဉ်အစမှာပင် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကေ ...
Posted Sep 4, 2012, 7:23 AM by lin ker
ABSDF(ဗဟို) ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ဒေါက်တာနိုင်အောင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း "တရား ဥပဒေ စိုးမိုးမှု ပွင့်လင်းထင်သာ မြင်သာမှုဖြစ်တဲ့ အခြေအနေရောက်ရင် အဖြစ်မှန် ပေါ်ပေါက်ရေးကို ကျွန်တော်တို့ ရှာဖွေ လုပ်ဆောင်ချင်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အပြည့်အ၀ ပူးပေါင်းပါဝင်မယ်လို့ ကျွန်တော် ပြောချင်ပါတယ်" ABSDF(ဗဟို) ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ဒေါက်တာနိုင်အောင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း Saturday, 01 September 2012 03:23	ABSDF(ဗဟို) ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ဒေါက်တာနိုင်အောင်အား ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် တွေ့ရစဉ် ၁၉၉၁-၁၉၉၂ခုနှစ်များအတွင ...
Posted Sep 4, 2012, 7:13 AM by lin ker
ဟုတ်အောင်ကြံ - ၄-၉-၂၀၁၂ by ဟုတ်အောင် ကြံ on Tuesday,4September 2012 at 15:32 ·အစတော့ မပြောတော့ဘူး လို့ ပဲ...မြောက်ပိုင်းမှာ ကျဆုံးသွားတဲ့ ABSDF ကျောင်းသားရဲဘော်တွေ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖေ့ဘုတ်မှာ၊ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေမှာ ကြားနေရတဲ့ အသံတွေဟာ စိတ်ပျက်ဖို့ တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ABSDF မြောက်ပိုင်းအဖြစ် အပျက်ဟာ လူသတ်ဝါဒ ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ကိစ္စဖြစ်တာကြောင့် ဟုတ်အောင်ကြံ တို့ အားလုံး ပစ်စလက်ခတ်မုန်းတီးတယ် ဆိုတာ အရင်ဆုံးပြောကြားလို ပ ...
Posted Sep 4, 2012, 8:04 PM by lin ker
ABSDF (မြောက်ပိုင်း ) ပါဂျောင်ငရဲစခန်းအကြောင်း ကျောင်းသားဟောင်းများ သတင်းစာရှင်းလင်း by Ko Lin Wai Aung on Tuesday,4September 2012 at 12:45 · ( ၆.၉.၂၀၁၂ ) ရက်စွဲပါ ရန်ကုန်တိုင်းမ်ဂျာနယ် အတွဲ( ၈ )- အမှတ် ( ၃၄ )မှကူးယူဖေါ်ပြပါသည်။
Posted Sep 4, 2012, 2:59 PM by lin ker
သတင်းလင့် ABSDF မြောက်ပိုင်းဖြစ်ရပ် နစ်နာခဲ့ရသူတွေ ရှင်းလင်းABSDF မြောက်ပိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များ သတ်ဖြတ်ခံရမှု သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ် ကျောင်းသားတပ်မတော် (မြောက်ပိုင်း) လုပ်ကြံမှု သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကျန်ရစ်သူများက ပြုလုပ်
Posted Sep 4, 2012, 2:36 PM by lin ker
မြောက်ပိုင်းလူသတ်မှု အမှုမှန်ပေါ်ရေး ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကမ်းလှမ်း မြတ်ကျော်သူ	| အင်္ဂါနေ့၊ စက်တင်ဘာလ ၀၄ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၀၇ မိနစ်	ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမို ကရက် တစ်တပ်ဦး ABSDF တွင်း လွန်ခဲ့သော အနှစ် ၂၀ က ဖြစ်ပွားခဲ့ သည့် မြောက်ပိုင်းလူသတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရန် ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ဦးထွန်းအောင်ကျော် က ပြောဆို ခဲ့သည်။တနင်္လာနေ့ ရန်ကုန်မြို့ ယုဇန ဟိုတယ်တွင်ပြုလုပ ...
Posted Sep 4, 2012, 7:12 AM by lin ker
ကိုသူရ(ဇာဂနာ)နှင့် ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်ခင်ဗျား............ ကိုသူရ(ဇာဂနာ)နှင့် ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်ခင်ဗျား...........................ကျောင်းသားတွေ၊ပြည်သူတွေကိုများများသတ်ခဲ့ ဘူးတဲ့အစိုးရကိုလက်ညှိးထိုးပြပြီးနဲနဲသတ်ဖူးတဲ့ သူတွေကိုခွင့် လွှတ်လိုက်ပါလို့ ဆိုလိုခြင်နေတာလားဗျာ။ လူနဲနဲသတ်ဖူးတဲ့ သူတွေနဲ့ မှကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ကတည်ဆောက်လို့ ရမှာလား။ဒီလိုလူတွေနဲ့ မှခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်လုပ်လို့ ရမှာလား။ကျွန်တော်ဘယ်သူ့ ကိုမှပုဂ္ဂိုလ်ရေးမုန်းတည်းလို့ ပြောတ ...
Posted Sep 3, 2012, 4:07 AM by lin ker
အသတ်ခံရတဲ့လူတွေဟာသူလျိုတွေမဟုတ်ဘူး စီးပွါးရေးတာဝန်ခံဖြစ်သူနေထွန်းကဆိုင်းတောင်မှာမနေဘဲဖါးပြင်ကျေးရွာရှိဦးတင်ထွန်းပိုင်နေအိမ်များတွင်သွားရောက် နေထိုင်ပါသည်၊(ယ္ခုမန္တလေးမြို့ရွှေညောင်ပင်ကြီး-ရွှေညောင်ပင်လေးဟော်တယ်ပိုင်ရှင်)ဖါးပြင်ကျေးရွာရှိ(ဦးပွါး-ဒေါ်ပုလဲ) တို့၏လ္ဘက်ရည်ဆိုင်တွင် လည်းကျောင်းသားအများစုလာရောက်နေ ထိုင်ကြပါသည်၊ ထိုအချိန်ကမြေပေါ်မြေအောက်မခွဲခြားဘဲ အားလုံး အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ခဲ့ကြပါသည်၊ မရှိအတ ...
Posted Aug 27, 2012, 6:53 PM by lin ker
မြောက်ပိုင်းလူသတ်မူ(အပိုင်း၁) မြောက်ပိုင်းလူသတ်မူ(အပိုင်း၁)မမီမီထွန်း Feb 11, '12 6:11 PM for everyone မြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ဒေ သအတွင်း(၁၉၉၁၁၉၉၂)အချိန် ပိုင်းကာလကဒီမိုကရေစီအရေးလူပ်ရှားသူအစစ် အမှန်ကျောင်း သားခေါင်းဆောင် များ၊အစစ်အမှန်ကျောင်းသားများ၊ အန်အယ်ဒီ အဖွဲ့ဝင်များ၊အပြစ်မဲ့မရှိဆင်းရဲ သားပြည် သူများအား(သူလျို) များဟုစွပ်စွဲကာ၊ရက်စက်ယုတ် မာစွာ၊စာနာ နားလည်မူကင်း မဲ့စွာ၊ကမ္ဘာ့စစ်သမိုင်း တွင်ရာဇ၀င်တွင်လောက် ကမ်းကုန ...
Posted Aug 27, 2012, 6:52 PM by lin ker
mi mi htun
ဘယ်အချိန်မှာများထောက်လှမ်းရေးလုပ်ချိန်ရသွားပါလိမ့်Aung Than Nyunt Aungnilai31 August FBသုံးတတ်ခါစ...ဟိုကြည့် ဒီဖတ်နဲ့ ABSDFမြောက်ပိုင်းအကြောင်းတွေလည်းဖတ်မိပါတယ်။တောခိုကျောင်းသားတွေရဲ့ ထိတ်လန့် တုန်လှူပ်ဖွယ်ရာ အဖြစ်သနှစ်ဆိုးတွေကိုသိခွင့် ရခဲ့ ပါတယ်။မကြွေသင့် ဘဲကြွေသွားရရှာသော၊မတားရားသဖြင့် နိပ်စက်ခံခဲ့ ရသူများအတွက်လည်းဝမ်းနဲမျက်ရည်ကြမိ ခဲ့ ပါတယ်။သူတို့ ကိုယိုးစွပ်ခဲ့ တာကတော့ ထောက်လှမ်းရေးတွေလို့ ဆိုပါတယ်။ဒီအထဲမှာကိုထွန်းအောင်ကျော်(က ...
Posted Sep 4, 2012, 2:18 PM by lin ker
သစ္စာပန်းရဲ့ ကာရန် Baydar LamThursday တောမခိုခင်က ထွန်းအောင်ကျော် ပဲ့တင်လှိုင်းတေးဂီတ အဖွဲ.နဲ.ဖျော်ဖြေပွဲတခုမှာ ရိုက်ထားတဲ့ပုံပါ။ သီချင်းဆိုနေတဲ့သူက ဗမော်၊အဲဒီဘေးက လိဒ် ဂစ်တာတီးနေတဲ့ သူက ကျော်သက် ခိုင်(ခ) ကိုပေါက်၊ဘေးက ကီးဘုတ်တီးနေတဲ့သူက ABSDF မြောက်ပိုင်းမှာ အသတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ထွန်းအောင်ကျော်၊ဘေးက ရစ်သမ်တီးနေတဲ့သူက ညွန်.ဝင်း(ကွယ်လွန်) တို.ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုသီချင်းတွေကိုများ တီးကြဆိုကြ တာပါလီမ့်။ ကျွန ...
Posted Aug 26, 2012, 6:39 PM by lin ker
တရားမျှတမှုကို တိုင်တည်ခြင်း(သို့)“မူဝါဒမျက်လုံး" ကိုကိုဦး(တပ်ရင်း-၁၀၂) ဇန်နာဝါရီလ(၆)ရက်၊၂၀၁၃ မြောက်ပိုင်းလူသတ်မှုကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ ပြဿနာကိုချည်းကပ်ပုံကရိုးရှင်းဖို့လိုတယ်၊ မူဝါဒအပေါ်အခြေခံဖို့လိုပါတယ်၊ ပြဿနာရဲ့ကျောရိုးက လူသတ်မှု murder crime ဖြစ်တယ်၊ ကျောင်းသား တပ်မတော်ရဲ့မူဝါဒ policy ကြောင့်ဖြစ်လာရတာမဟုတ်ဘူး၊ ကျောင်းသား တပ်မတော်မှာ စည်းကမ်းအပြည့်နဲ့ရေးဆွဲထားတဲ့အခြေခံဥပဒေရှိတယ်၊ Rules and regulation တွေအတိအကျရှိတယ်၊ ဒါတွေကိုဘယ်သူတွေကဖေ ...
Loss of Innocence http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3781200923875&set=a.1016120678597.2003038.1092485704&type=1&theater
nan aung htwe kyi
ပြည်တွင်ဂျာနယ်တခုထဲက တိုက်ပွဲနဲ့ အတူ ကျောင်းသားတပ်မတော်ပြန်လည်ပေါ်လာရခြင်းအပေါ် နားမလည်ဟု..နှင့် ပတ်သက်၍.. by Kayin Lay on Saturday, 12 January 2013 at 06:59 ·ပြည်တွင်ဂျာနယ်တခုထဲက တိုက်ပွဲနဲ့ အတူ ကျောင်းသားတပ်မတော်ပြန်လည်ပေါ်လာရခြင်းအပေါ် နားမလည်ဟု..နှင့် ပတ်သက်၍.. မငယ်တို့ တွေမရှိတဲ့တော့နောက် မြောက်ပိုင်းကျောင်းသားတပ်မတော်က မ၇ှိတော့ဘူးလိုဆိုရင်မှားပါလိမ့်မယ်...၁၉၉၃ခုနစ်ကစလို့ မြောက်ပိုင်ကျောင်းသားတ့ပ်မတော်ဟာ တပ်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်...အဲဒီအချိန်မှာ ကေအိုင်အေက စတင်ပြီးအစိုးရနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေ ...
Posted Jan 11, 2013, 7:59 PM by lin ker
After 20 years, mother ends silence on ABSDF ordeal ShareBy Ma Thanegi Volume 32, No. 638 August 06 - 12, 2012 Daw Myint Myint Kyi at her home in Yangon. Pic: Ma ThanegiDAW Myint Myint Kyi, 62, runsasmall parikkara (monk utensil) shop out of the front room of her ground floor flat and isadevout Buddhist. It was her strong faith that saw her through 1992:ayear of unimaginable terror. “At times, I even wanted to kill myself,” she told The Myanmar Times inarecent interview. “The only thing that kept me alive was that I knew I must save my son at all costs.” After 20 years, the story can finally be told. Her youngest son Bo Bo was involved in the 1988 uprising ...
Posted Aug 16, 2012, 9:03 PM by lin ker
မနောမြေမှကျောင်းသားတပ်မတော် အပိုင်း ၅ ... ငရဲတွင်းမှလွတ်မြောက်ခြင်း by Nang Aung Htwe Kyi on Sunday, 12 August 2012 at 13:10 · ၁၉၉၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂ ရက် ညပိုင်းဆိုတော့ ကျမတို့ ABSDF-NB မြောက်ပိုင်းကျောင်း သားတပ်မတော်တည်နေရာ ပါဂျောင်ဒေသ လိုင်စင်စခန်းမှာ အအေးဓါတ်လွှမ်းခြုံနေပြီ။ညဥ့်နက်ပိုင်း ၁၁နာရီခန့်ဆိုတော့ သံချောင်းရဲ့ တဲမှာ သက်လင်း ကထင်းမီးလှုံဖို့လုပ်တယ် ။ ကျမနဲ့သံချောင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ပြီး စကားပြော ဆိုခြင်းးမရှိဘဲ အတန်ကြာ မီးထိုင ...
Posted Aug 14, 2012, 9:56 PM by lin ker
မနောမြေမှကျောင်းသားတပ်မတော်အပိုင်း (၄) ငရဲတွင်းမှလွတ်မြောက်ခြင်း လွတ်မြောက်ခြင်းရဲ့အစကနဦး ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်ခဲ့တယ်။၁၉၉၂ ခုနှစ် မေလ ၂၁ ရက်နေ့ ညမှာ ABSDF-NB မြောက် ပိုင်းကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲ့ ထောင်အတွင်း အကျင်းချခံထား ရ စဲဖြစ်သော ကျောင်း သား ၅၅ ဦးထွက် ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့ ညမှာဘဲ ကိုရဲလင်း(ရန်ကုန်)၊ ကိုဝဏ္ဏဇော် (ရန်ကုန်) ၊ ကိုဘိုဘို(ရန်ကုန်) ၊ မိုးဇော်ထွန်း-မိုးကြီး(ရန်ကုန်)၊ ကိုကျော်နိုင်ဦး-ကြောင် (သာ ယာဝတီ)၊ကိုညီညီအောင်-ဒိုဇာ(ပဲခူး) ၊ က ...
Posted Aug 6, 2012, 7:25 PM by lin ker
မနောမြေမှကျောင်းသားတပ်မတော် ၃ မနောမြေမှကျောင်းသားတပ်မတော် ၃ by Nang Aung Htwe Kyi on Sunday, 20 May 2012 at 14:46 ·၁၂.၀၂.၁၉၉၂ မှာ ကိုထွန်းအောင်ကျော်နဲ့အတူကျောင်းသား ၁၅ ဦးကို လူမဆန်စွာခေါင်းဖြတ်သတ်ခဲ့တယ်။၁၃.ဝ၂.၁၉၉၂ မှာ ယိုးဒယားသတင်းထောက် ယင်ဒီး နဲ့တွေ့ဆုံခိုင်းတဲ့အတွက် The Nation သတင်းစာမှာယင်ဒီးမှရေးသားတင်ပြခဲ့ပါတယ်။အောင်နိုင် ခေါ် ရော်နယ်အောင်နိုင်(ယခုထိုင်းနိူင်ငံချိန်းမိုင်) နဲ့ကျော်ကျော်(ယခုABSDF -NB ကချင်ပြည်နယ်) တို့က၁၅ ဦးအား သေဒဏ်ချမ ...
Posted May 20, 2012, 3:49 PM by lin ker
Untitled Post Kyi Kyi Khin ၈လေးလုံး ၂၃ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် လိုင်ဇာတွင် ကျင်းပ။ အေဘီမြောက်ပိုင်းနှင့် ကေအိုင်အ ...
Posted Jun 6, 2012, 7:47 PM by lin ker
Untitled Post KIO မှာရှိတဲ့တပ်တွေ ဦးစီးချုပ်ဖလား လုပွဲမှာကျောင်းသားတွေလဲဝင်ပါပြီ KIO ရဲ့ဦးစီးချုပ်ဒိုင ...
Posted Jun 6, 2012, 7:23 PM by lin ker
ko wanna zaw
ABSDF(စစ်ကိုင်း)မဖွဲ.စည်းနိုင်မှီ ခြေမှုန်းခံခဲ့ရခြင်း Retold By ကိုမြင့်သိန်း (ကသာ) မြောက်ပိုင်းမှာမျိုးဝင်းနဲ.သံချောင်းတို.ရဲ့ အပြုအမှုအပြောအဆိုတွေကိုလက်မခ ...
Posted Jun 27, 2012, 9:03 PM by lin ker
အနှိပ်စက်ခံ ABSDF- NB မြောက်ပိုင်းပြန်ကျောင်းသား ရဲဘော်ဟောင်းကိုဝဏ္ဏဇော် ၏ ပြောကြားချက်များ by Ko Lin Wai Aung on Sunday, 17 June 2012 at 11:50 ·မြောက်ပိုင်းပြန် ကျောင်းသားရဲဘော်ဟောင်း ကိုဝဏ္ဏဇော် ရှမ ...
Posted Jun 20, 2012, 2:16 PM by lin ker
အောင်နိုင်ခေါ်ရော်နယ်အောင်နိုင် နှင့် BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ် by Nang Aung Htwe Kyi on Monday, 11 June 2012 at 15:21 ·ဒီတခါတော့အားလုံးသေသေချာချာသိအောင်ရေးပြရတော့မယ်။BBCနဲ့ ...
Posted Jun 11, 2012, 3:59 PM by lin ker
သို့ .......ကိုကြောင် by Khine Khine Saw Lwin on Thursday,7June 2012 at 03:21 ·ကိုကြောင်(ခ) ကိုကျော်နိုင်ဦးက " အမရေ ဟင်္သာကိုးသောင်းစာအ ...
Posted Jun 8, 2012, 7:13 PM by lin ker
ဒီကနေ့ မြောက်ပိုင်း အေဘီ လက်ရှိ ကချင်ဒေသတွင် တိုက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေကြတဲ့ ABSDF ရဲမေများ.ရှေ့တန်းထွက်ဖို့ အသင့်ဖြစ်နေကြပြီမကဒတ ဥက္ကဌ ...
Posted Jun 8, 2012, 7:03 PM by lin ker
ကိုသိုက်ထွန်းဦး(၅၀၁)ရင်းမှုးသို.ပြန်ကြားစာ ကိုသိုက်ထွန်းဦး ခင်ဗျားဟာထောင်ထဲမှာဘယ်သူ.ကိုဝင်ရိုက်မသွားဘူး၊စစ်ကြောရေးမှာမပါဘူး၊သတ်တဲ့အထဲမပါခဲ့ဘူး ဆိုပြီး သိထားခဲ့လို.ခင်ဗျား ကိုကျနော်က အကြမ်းပြု စုခဲ့တဲ့တရားခံစာရင်းထဲမှာထည့်မထားခဲ့တာပါ။ခင်ရွှေ လှိုင်ကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့POSTတွေ၊ ကျနော်တို.နဲ.ပူးပေါင်း ခဲ့တဲ့သူတွေရဲ. ထွက်ဆိုချက်တွေကြောင့်ခင်ရွှေလှိုင် ကိုတရားခံစာရင်းထဲမှာအကြမ်းထည့်ထားခဲ့တာပါ။ဒီစာရင်းတွေကအတည်ပြုဖို.လိုပ ...
Posted Jun 2, 2012, 3:40 PM by lin ker
ငရဲ ညတည by Nang Aung Htwe Kyi on Sunday,9September 2012 at 04:42 ·AB မြောက်ပိုင်းပြန်တွေ ..သူမတူ ခံစားခဲ့ရတဲ့ဒဏ်တွေနဲ့ ...
Posted Sep 9, 2012, 7:47 AM by lin ker
လွင့်ကြွေသွားသောကြယ်ဖြူများ by Nang Aung Htwe Kyi on Tuesday, 24 April 2012 at 03:11 ·ကျော်စွာဝင်းမောင် ..အမ မငယ် စာရေးလိုက်တယ်။သီချင်းရေးလ ...
Posted May 13, 2012, 9:36 AM by lin ker
ဂုဏ်ရောင်ပြောင်တဲ့ကျော်ကျော်မင်း(သို့ မဟုတ်)အကြွေစောခဲ့ရတဲ့ ပန်းကောင်းတစ်ပွင့် Thursday, May 3, 2012 by Kyaw Gyi AB on Thursday,3May 2012 at 08:37 · ကျောင်းသားချင်းသတ်ဖြတ်မှုမှာ ကျဆုံးခဲ့တဲ့(၃၅ ...
Posted May 13, 2012, 8:21 AM by lin ker
ကျော်ကျော်မင်း (ကန့် ဘလူ) by Kyaw Gyi AB on Sunday, 13 May 2012 at 00:29 · အကြွေစောခဲ့ရတဲ့ ပန်းကောင်းတစ်ပွင့် -အသက်ငယ်ပေမဲ့ပါဂျောင် (AB ...
Posted May 13, 2012, 8:19 AM by lin ker
ဂုဏ်ရောင်ပြောင်တဲ့ကျော်ကျော်မင်း(သို့ မဟုတ်)အကြွေစောခဲ့ရတဲ့ ပန်းကောင်းတစ်ပွင့်
KNU told case for Nay Win Aung
မြောက်ပိုင်းရဲဘော်များအတွက် အမှတ်တရအခန်းအနား(ဖို့ ဝိန်း)-ရုပ်သံ
ဇာဂနာရဲ့ မြောက်ပိုင်းလူသတ်ပွဲပေါ် သဘောထား
အေဘီမြောက်ပိုင်းကေ့စ်ကို ဖြန့် ကျက်တွေးမိသောအခါ(ဘရာဇီးငှက်ရိုး)
မြောက်ပိုင်းလူသတ်မှုအတွက် တာဝန်ရှိသော အဖွဲ့ အစည်းများစာရင်း
ကျောင်းသားတွေပါ။ ကျနော့်အသက်နဲ့ ပုံလောင်းပြီးပြောရဲပါတယ်(ကိုမြအေး)(ရုပ်သံ)
t o mo r r ow ကိုခံစားခြင်း(စစ်ငြိမ်းဒီရေ)
t o m o r r o w(ဆူးမြင့်သိန်းရဲ့ တင်ဆက်မှုအနုပညာ)(ရုပ်သံ)
ကျောင်းသားတပ်မတော်က မိတ်ဆွေများကို တောင်းပန်တဲ့စာ(မောင်ရစ်)
ABSDF စုံစမ်းရေးကော်မရှင်မဖွဲ့ နိုင်ရင် အင်္ဂလန်ကနေတရားစွဲမတဲ့(ကောင်းမြတ်သူရဲ့ ရာဇသံ)
သူရဲကောင်းတို့ ရဲ့ သူရဲကောင်းမေမေ
ကျနော်တို့ ရဲဘော်အပေါင်းသတိရှိကြပါစို့ (လှသိန်း)
လူသတ်တရားခံသံချောင်း ၂၅နှစ်+သေဒဏ်(နှစ်အကန့် မရှိ)ကိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအဖြစ်မှ လွတ်မြောက်ဖို့ ကန့် ကွက်ပါ
loss of innocence at the ABSDF(north) or အပြစ်မဲ့ကျောင်းသားတွေဟာသူလျှိုတွေလား(အေးအေးစိုးဝင်း)
မြောက်ပိုင်းကိစ္စ ကိုထွန်းအောင်ကျော် ဂျပန်မှာဟောပြောမည်
ABSDF မြောက်ပိုင်းတွင်းကျောင်းသားများမတရားသတ်ဖြတ်ခံခဲ့သည့် အမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဥက္ကဟောင်းကိုထွန်းအောင်ကျော်၏ အကြံပြုချက်
ပန်းနဲ့ ပေါက်တာလောက်ပဲထင်တယ် သူငယ်ချင်းတို့ ရေ(ကိုကိုဦး)
လက်ရှိ ABSDF မကဒတ ဗဟိုကော်မီတီသို့အကြံပေးစာ(ကိုကိုဦး)
ညီအကိုချင်းပေးစာ( သို့ )သံဒုတ်မှ သံခဲသို့ (သို့) သံခဲရေ - မင်းခေါင်းဖြတ် ခံနေရအုံးမယ်၊(သံဒုတ်)
How student leader ko htun aung kyaw and comrades were inhumanly killed
Burmese Rebels admit 15 excutions
World in brief: Myanmar: Dissident Students slay 15 Alleged spies
မေ မေ့ရဲ့ နားထဲမှာသမီးလေးရဲ့ ရှိုက်သံကြားနေခဲ့ရတယ်
မြောက်ပိုင်းလူသတ်မှု စုံစမ်းရေးကော်မရှင် တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ပါ
Sharing comments in ABSDF-North with recommendations for currnet ABSDF
Subpages (2): htun aung kyaw သဘောအထွေထွေ